कर्णालीमा निर्माण सामग्री अभाव, आयोजना अलपत्र – दैनिक नेपाल न्युज
May 21, 2020 दैनिक नेपाल न्युजLeaveaComment on कर्णालीमा निर्माण सामग्री अभाव, आयोजना अलपत्र
– मानदत्त रावल,
जुम्ला, ८ जेठ: कोरोना भाइरसले अहिले नागरिक त्रसित छन् । भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि झण्डै दुई महिनादेखि दिनदेखि देश लकडाउनमा छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माण देखिएको छ । अहिले कर्णालीमा निर्माण सामग्री अभाव भएपछि लकडाउनअघि सम्झौता भएका आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । यहाँका स्थानीयवासीले आफ्ना व्यक्तिगत घर बनाउन निर्माण सामग्री पाएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको एक दशक बढी भयो । यहाँका नागरिक सडक नपुग्नुभन्दा पहिला ढुङ्गामाटोको घर बनाउने गर्ने गरेका थिए तर सडक पुगेसँगै यहाँ पक्की भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेका हुन् । अहिले जुम्लामा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, छट (सरिया) जस्ता पाताको बढ्दो माग छ । कर्णाली प्रदेशको करोडौँ लागतमा जुम्लाको तिला गाउँपालिकास्थित एक मेगावाटको तिला जलविद्युत् आयोजना र पातारासी गाउँपालिकास्थित एक मेगावाट जवानदी चुकेनी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । लकडाउनले दुवै आयोजना प्रभावित भएका छन् । बढीमा दुई वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना लकडाउनले प्रभावित भएका हुन् ।
चुकेनी जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोरबहादुर बुढाले भन्नुभयो, “लकडाउनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी सकिरहेको छैन ।” वीरगञ्जबाट विद्युत् सामग्री, पाइपजस्ता सामग्री जुम्ला ल्याउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म ढुवानी गर्न सकिएको छैन । फैलिँदो कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नका लागि देश ५६ दिनदेखि लकडाउनमा छ । लकडाउनले आयोजनामा कामदार भेला गरी काम गर्न पनि समस्या भएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुढाले बताउनुभयो ।
कैलाश जनरल स्टोर जुम्लाका प्रोपाइटर देउऋषि चौलागार्इँका अनुसार अहिले जिल्लामा निर्माण सामग्री अभाव छ । सरकारको अनुदानमा ठूलो चिस्यान घर (कोल्डस्टोर) निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सिमेन्ट ढुवानी नभएर अहिले निर्माण समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । लकडाउनले व्यापारी उद्योगी अहिले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
एकातिर बैंकको ब्याजदर बढ्दो अवस्थामा छ । अर्काेतिर व्यापार व्यवसाय बन्द अवस्थामा रहेकाले व्यापारीले घाटा व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अहिले ब्याज छुटको माग गर्दै आएको छ । ब्याज छुट भएका खण्डमा कोरोना राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने पनि योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । यदि ब्याज छुट भएको खण्डमा राहत कोषमा पाँच लाख रकमसम्म जम्मा गर्ने इच्छा छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ शाखा जुम्ला अध्यक्ष रजवअलि मनियारले भन्नुभयो, “अहिले जुम्ला बजारमा सिमेन्ट, छड सरिया, जस्तापाताजस्ता निर्माण सामग्री कुनै पनि मौज्दात छैन ।” लकडाउनले निर्माण सामग्री ढुवानी हँुदा अभाव भएको हो । फाटफुटरूपमा आएको निर्माण सामग्री गोदाममा नपुग्दै गाडीमै बिक्री वितरण हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
फैलिदो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका १८ वटा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि प्रशासनले सहजीकरण गरेको छ ।” निरन्तर निर्माण सामग्री ढुवानी नभए पनि छिटफुटरूपमा निर्माण सामग्री ढुवानी भइरहेको छ । कोरोना भाइरसबाट आम नागरिकलाई जोगाउनकै लागि सरकारले लकडाउन गरेको हो । यसमा सबैले बुझ्न बुझाउनु पर्दछ ।
स्थानीय तहका लकडाउन अगावै सम्झौता भएका विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न पनि सहजीकरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । कुन स्थानीय तहले के कति निर्माण सामग्री आवश्यक हो । निर्माण सामग्रीको सूचीकृत गरी आएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल भए बमोजिम सहजीकरण हुने प्रजिअ बञ्जाडेले बताउनुभयो ।
विपन्नलाई राहत वितरण
लडाउनका कारण प्रभावित नागरिकलाई छाक टार्नका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले २ नं वडाका १८६ जनालाई राहत वितरण गरेको हो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ जुम्लाबाट १०, आर्ट अफ द नेपाल लिमिटेडबाट १० र १६६ जनालाई नगरपालिकाको तर्फबाट गरी १८६ जनालाई राहत वितरण गरेको नगर उपप्रमुख अप्सरादेवी महतले बताउनुभयो ।
विपन्न तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकलाई लक्षित गरी राहत वितरण गरिएको नगरउपप्रमुख अप्सरादेवी महतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लकडाउनको समयवधि बढेपछि विपन्नको छाक टार्न समस्या भएकाले राहत वितरण गरिएको हो ।” १५ किलो चामल, एक लिटर तेल र एक किलो नुन राहतस्वरुप वितरण भएको वडाध्यक्ष धनरासी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । लकडाउनले प्रभावित भएका विपन्न, अपाङ्ग, असहाय, वृद्ध र बेरोजगार व्यक्तिलाई छनोट गरी राहत वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । राहत वितरण सङ्घीय सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार वितरण गरिएको छ । (रासस)
प्यारी नेपाल आमाकी छोरी बलिउडकी चर्चित नायिका मनिषा कोईराला ज्यु हजुरलाई स्वलुट छ !
सेवाग्राहीसँग प्रहरीले घु स मागेपछि …
December 23, 2019 दैनिक नेपाल न्युज
May 11, 2020 दैनिक नेपाल न्युज
सीमानाकामा गर्भवती समेत अलपत्र !
May 10, 2020 Nirmala Karki